Soomaaliya: Dawladda Oo Soo Saartay Xog Cusub Oo Ku Saabsan Qaraxii SOOBBE | Dhamays Media Group
Soomaaliya: Dawladda Oo Soo Saartay Xog Cusub Oo Ku Saabsan Qaraxii SOOBBE
Muqdisho (Dhamays) – Dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Raggii fududeeyay qaraxii dadka badan ku dhamaadeen ee 14-kii October ka dhacay Isgooska Soobe ee Magaalada Muqdisho.
Wasaaradda Amniga ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegtay in wali socdo baadhitaano dheeraad ah oo ku aadan qaraxii Soobbe, waxa ayna Wasaaradda Amniga hadda shaacisay magacyada xubno gacanta ugu jira iyo kuwa baadi goob loogu jiro.
Hey’adaha ammaanka Soomaaliya ayaa weli sii wada baadhitaannada ku aaddan dadkii loo qabtay qaarkood weerarkii 14-kii October lagu xasuuqa boqollaal dad masaakiin ah.
Shaqsiyaadka la soo bandhigay ayaa qaarkood laga heyn sawiro, iyadoo Hay’adaha amaanka Dowladda ay sheegeen iney ku daba jiraan walina baadhis ay socoto.
(Sawir malahan)- Mukhtaar Gar-dhuub oo loo yaqaanno Ceynaan ama Fanax waa madaxa Amniyaadka Al-shabaab waa ninkii dajiyey qorshaha xasuuqii Soobbe, waxa uu ku sugnaa deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose waa lagu daba jiraa.
(Sawir malahan)- Cabdiweli Cabdi-qani waa madaxa Qaraxyada gobolka Benaadir ee Al-shabaab, waxa uu amarka ugu dambeeya ka qaataa Mukhtaar Gadh-dhuub waa lagu daba jiraa.
Xasan Aadan Isaaq waxaa loo diyaariyey markii hore in gaadhiga NOAH-da ah uu isku qarxiyo, waana isku xidhihii weerarkii Soobbe, waxaa gacanta ku haya hay’adaha amniga ka hor inta aanu qarxin gaadhiga NAOH oo uu watay.
Cali Yuusuf Wacays (Ducaale) waxa ay ciidanka Amniga ku qabteen isaga oo weli aanu soo gaadhin dhagar-qabihii gaadhiga NOAH-da waday ee la qabtay.
gaadhigii TM-ka ee SOOBE lagu qarxiyey waxaa waday naftii halige Xuseen Aadan Maadeey (Cismaan Xaaji) ayuu ku magac dheeraa, Hooyadii waxaa la yidhaahdaa Faadumo Cismaan Cali deggan Mareerey.
“Gaadhiga TM-ka waxaa la iibiyey 18-08-2017-ka waxaa laga iibiyey (Sawir malahan)- Cabdillaahi Ibraahim Xasan, wuxuu ka iibiyey Xasan Aadan Cabdullaahi “Afrax” iyadoo lagu wareejiyey Nootaayo ku yaalla gobolka Banaadir”.
Ninka Mulkiillaha ah Cabdillaahi Ibraahim Xasan weli hay’adaha amniga gacanta kuma dhigin, laakiin waxaa la shaacin doonnaa sawirradiisa, ciddiisa soo sheegtana waxaa la siin doonaa abaalmarin ay ku faraxdo.
“Gaadhiga TM-ka ka hor intaanu Qarxin waxaa la saaray waddada Afgooye iyo Muqdisho si aanan looga shakin, safarkiisii ugu horreeyey waxa uu billaabay 13/09/2017-ka waxa uu qaadi jiray Galleyda darawalkii ku shaqeyn jiray waxa uu ahaa Xuseen Aadan Maadeey naftii “halige” ee SOOBBE isku Qarxiyey.
Cabdiweli Axmed Diiriye ayaa dammiintay gaadhiga, TM-ka laakiin ciidamada amniga ayaa diidey oo ku qanci waayey.
Mukhtaar Maxamuud Xasan oo ah nin si weyn looga garanayey oo deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa ugu dambeyn gaadhiga TM-a dammiintay kaddib markii ciidanku ay ku qanceynna sidaa ayaa lagu sii daayey gaadhigii.
Canshuur bixiyihii gaadhiga TM-ka waxaa lagu magcaabaa Cabdillaahi Cabdi Warsame oo hadda ku jira gacanta hay’adaha Amniga Soomaaliya.
Hay’adaha amniga Soomaaliya ayaa wada dhammeystirka xogta ama macluumaadkii ugu dambeeyey ee baadhitaannada ay hadda ku howlan yihiin, si jawaabo looga bixiyo gummaadkii Muqdisho ka dhacay 14-kii October ee 2017-ka, xogta oo dhanna dhowaan ayaad ka heli doontaan Hay’adaha amniga Soomaaliya.
Previous: Madaxweynaha La Doortay Iyo Musharraxii WADDANI Oo Is-laab-xaadhay
Next: “Madaxweynaha cusub, Laba Reer May Soo Saarin..” Sheekh Aadan-Siiro + MUUQAAL